अब दाङको समृद्धिको नेतृत्व गर्छु | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / अब दाङको समृद्धिको नेतृत्व गर्छु
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता December 4, 2017	0 220 Views
उपप्रधानमन्त्री एवं दाङ क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार
चुनाव प्रचार उत्कर्षमा पुगे को छ, तपाइ“को क्षे त्रको चुनावी माहो ल कस् तो छ ?
२१ गते हुने निर्वाचन चरम उत्कर्षमा पुगे को छ । आज सो मवार रातको १२ बजे दे खि मौ न अवधि शुरु ह“ुदै छ । अहिले सम्म मै ले मे रो क्षे त्रका करीव एक सय चुनावी सभालाई सम्वो धन गरे ं । त्यहा“ जनताको बाक्लो उपस् िथति पाए“ । मलाई अनौ पचारिकरुपमा भे ट्न चाहने र मतदानको प्रतिबद्धता जनाउने को संख्या पनि निकै ठूलो छ । बिहान ५ दे खि राति १० बजे सम्म यो क्रम चल्ने गरे को छ । जनताको उत्स् ााहले मलाई सो चे अनुरुप नै उत्साहित बनाएको छ । मै ले समुदाय, वस् ती र टो लमै पुगे र पनि मतदाता भे टे को छु । मतदाता निकै उत्स् ााहित छन् ।
समग्रमा दाङको अवस् था कस् तो पाउनुभयो ?
दङाली जनतामा निर्वाचनको उत्साह निकै बढे को छ । जिल्लाभर नै घरदै लो अभियान, चुनावी सभा र कार्यकर्ता भे टघाट चलिरहे काले समग्रमा दाङ जिल्ला निर्वाचनमय भएको छ । जनताको उत्साहले हामीलाई पनि उत्साहित बनाएको छ । म प्राविधिकरुपमा एउटा निर्वाचन क्षे त्रको उम्मे दवार भए पनि राजनीतिकरुपमा जिल्लाभरिकै मतदाताले मबाट धे रै आशा गरे को पाए“ । दाङबासी जनताले मबाट धे रै अपे क्षा गरे काले मलाई पनि थप उत्साहित बनाएको छ र दाङका लागि दे खिने गरी धे रै काम गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने बो ध भएको छ । निर्वाचनको दृष्टिले हे र्ने हो भने पनि जिल्लामा शान्तिपूर्ण निर्वाचन हुने अवस् था दे खिएको छ । तुलसीपुरमा भएको दुखद् घटनाले मलाई दुखित बनाएको छ, त्यसबाहे क अन्य कुनै घटनाबिना नै निर्वाचन सम्पन्न हो स् भन्ने चाहन्छु । त्यसका लागि सुरक्षा निकायको तदारुकता प्रशंनीय छ ।
यहा“ले २०४८, ०६४ र ०७० मा तीनपटक चुनाव जित्नुभयो , विगत र अहिले को चुनाव प्रचारमा के भिन्नता रह्यो ?
विगतका निर्वाचनहरु जनताको अधिकार स् थापित गर्ने सवालमा के न्द्रित थिए । उतिबे ला अधिकार प्राप्तिका एजे ण्डा नै मुख्य थिए । संविधान जारी भइके पछि अब जनताका न्यूनतम अधिकार संस् थागत भएका छन् । त्यसै ले अहिले को निर्वाचन समृद्धि र विकासमा के न्द्रित छ  । अब राजनीतिक ‘डिबे ट’ सकिएका छन् र राजनीतिले नया“ को र्स लिएको छ । अर्काे कुरा पहिले का चुनावको प्रचारशै ली पनि फरक थियो  । अहिले त्यो पनि फे रिएको छ । प्रचारका नाममा तडकभडक विस् तारै कम हु“दै गएका छन् । हामीले लामो लडाइ“ लडे र व्यवस् था परिवर्तन ग¥यौ ं, त्यसको परिणाम पनि दे खिन थाले को छ । धनपै सा नहुने हरु पनि चुनाव लड्ने स् िथति बन्दै छ । यसलाई अझै सुधारे र लै जानुपर्छ भन्ने मा हामी छौ ं ।
चुनाव प्रचारमा प्रत्ये क गाउ“–गाउ“, घर–घरमा पुग्नुभयो , खासमा जनताका समस् या के –कस् ता रहे छन् ?
दाङका समस् या थुप्रै छन् । शुद्ध खाने पानी पुग्न सके को छै न । कतै बाटो घाटो नै छै न । खे तीयो ग्य जमिनमा उत्पादकत्व घट्दै गइरहे को छ । सिंचाई अभाव बढ्दै छ  । तमाम समस् याहरु जीवितै छन् । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्रो तबाट बनाउनुपनेर् ठूला यो जना शुरु नै भएका छै नन् । मसिनो गरी के लाउने हो भने मतदाताले आफ्ना वरिपरिका धे रै समस् या उठाउ“छन् तर समग्र निर्वाचन क्षे त्र र अझ जिल्लाका सबै मतदाताले समानरुपमा उठाउने मुद्दा भने का प्रदे श राजधानी र समृद्धिको हो  ।
बाहिर के ही मतदाताले चुनाव जिते पछि महरा दाङमै रहन्छन् रह“दै नन् भने र पनि प्रश्न गनेर् गरे का छन्, यो प्रश्न मतदाताले कत्तिको उठाए ?
यो प्रश्न स् वाभाविकरुपले उठे को छ । मै ले धे रै ठाउ“मा राखि नै सके ं, म अब दाङकै से वामा समर्पित हुने छु । मलाई दाङबासीले यति धे रै माया गरे का छन्, यसको गुण जीवनभर म दाङमै बसे र तिनेर् छु । म तपाइ“को पत्रिकामार्फत यो पनि घो षणा गर्न चाहन्छु कि दाङको समृद्धिको ने तृत्व अब म गनेर् छु । दाङमा धे रै सम्भावना छ तर यहा“को विकास गनेर् , राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्रो तमा पहु“च भएको ने ता भएन भन्ने दाङबासीको गुनासो दै निकजसो सुन्ने गरिएको छ । अब म त्यसको पूर्ति गनेर् छु । म जति बा“च्छु दाङकै विकासमा समर्पित हुने छु । कतिपय आफ्नो एजे ण्डा नभएका छुद्र व्यक्तिहरुले मलाई दाङ र रो ल्पास“ग जो डे र प्रचार गनेर् गरे को पनि मै ले सुने ं । म तपाइ“लाई एउटा पक्ष बताउ“, म यहा“ चुनाव लड्नुपर्छ भने र हाम्रो पार्टी माओ वादी र गठबन्धन बनिसके पछि एमाले ने ता कार्यकर्ताको त जो ड थियो नै , कांग्रे समा आस् था राख्ने थुप्रै व्यक्ति र सामाजिक क्षे त्रका ने ताहरु मलाई काठमाडौ ंमा महिनांै दे खि भे टे र तपाइ“ अब दाङबाटै चुनाव लड्नुपर्छ र दाङलाई अभिभावकत्व दिनुपर्छ भने र आग्रह गर्नुभएको थियो  । नभन्दै म आएपछि उहा“हरुको ठूलो सद्भाव पाएको छु । अन्य विचार राख्ने धे रै साथीहरुले समूह बनाएर र व्यक्तिगतरुपमा मे रो छुट्टै प्रचार पनि गरिराख्नुभएको छ । यसलाई मै ले दुई अर्थमा लिएको छु । एउटा त दाङबासीले यति धे रै माया गर्नुको पछाडि म दाङबासीस“गै थिए“ र उहा“हरुले त्यस् तो महसुस गर्नुभएको रहे छ भन्ने लागे को छ । त्यस् तै मलाई अब दाङबासीले टाढा जान दि“दै नन् भन्ने सन्दे श पनि हो  । जहा“सम्म रो ल्पास“ग जो डे र गरिने प्रचार छ । म रो ल्पामा जन्मिए“, दुईपटक रो ल्पाबाट चुनाव जिते ं र एकपटक दाङमा जिते ं । अहिले दो स्रो पटक दाङमा चुनाव लड्दै छु । म उमे रले साठी पुग्न थाले को र दे शको एक जिम्मे वार ने ता हु“, मै ले कहिल्यै छलढा“टको राजनीति गरे न र भो टका लागि जे पनि गनेर् मे रो प्रवृत्ति हो इन । त्यसै ले म अब दाङको समृद्धिमा समर्पित भएको घो षणा गरिसके पछि मलाई टाढा धके ल्न खो ज्नुको कुनै औ चित्य छै न । जहा“सम्म मलाई माया गनेर् साथीहरुले उठाएको चिन्ताको विषय छ, यसमा पनि निकै गम्भीर छु र त्यो व्यवहारबाटै दे खाउने छु ।
चुनाव प्रचारका लागि अन्य दलसम्बद्ध मतदाताको प्रतिक्रिया कस् तो पाउनुभयो ?
के ही त माथि पनि भने ं, धे रै राम्रो पाएको छु । कतिपय साथीले मलाई सो ध्छन्– तपाइ“ भाषण गर्दा प्रतिस् पर्धी दल र उम्मे दवारको किन बिरो ध गर्नुहुन्न ? एक त यो मे रो प्रवृत्ति हो इन, दो स्रो कुरा तपाइ“को प्रश्नस“ग पनि सम्बन्धित छ । मलाई अन्य दलका ने ता कार्यकर्ताले समे त ठूलो आशा गरे काले र उनीहरु समे त मतदानका लागि तयार भइसके काले म त साझा उम्मे दवारजस् तो भइसके ं । खासगरी परिवर्तन रुचाउने , मे रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पहु“चको उपयो ग गरे र दाङको समृद्धि गर्न चाहने र दाङलाई प्रदे श राजधानी चाहने सबै विचार र दलस“ग आस् था राख्ने साथीहरुको मलाई समर्थन छ ।
तपाइ“ले दाङमा जित्ने आधार के –के हुन् ?
जित्ने आधारहरु पनि थुप्रै छन् । पहिलो कुरा त मप्रति विश्वास गनेर् हरुको संख्या निकै ठूलो छ, यही मे रो जित्ने आधार हो  । म ०६४ सालको निर्वाचन दाङबाटै लडे को हु“ । म दाङबासीको से वा र विकासका लागि निरन्तर लागे को छु । तपाइ“ले पछिल्ला के ही काम हे र्नुभयो भने पनि मे रो अनुरो ध अस् वीकार गनेर् कम छन् । दाङ प्रादे शिक राजधानी मे रो सपना हो  । यसका लागि मै ले सबै दलका शीर्ष ने ताहरुलाई सहमत गराइसके को छु, राजधानी घो षणा मात्र हुन बा“की छ । त्यस् तै मै ले सपनाकै रुपमा लिएर अघि बढाएको राप्ती स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधे यक पारित गरे र स् थापनाको तयारीमा छ । म अर्थमन्त्री भएको बे ला दाङमा पा“च अर्ब बढी बजे ट राख्न सफल भए“ । त्यतिबे ला दाङको सडकमा ७७ करो ड मात्र बजे ट रहे छ, त्यसलाई झण्डै पौ ने तीन अर्बमा पु¥याए“ । मै ले के गरे ं भन्ने मै ले आफै भन्ने भन्दा पनि दाङबासीले नै बढी थाहा पाएका छन् । यी प्रायः काम म यहा“को जनप्रतिनिधि नभएको बे ला गरे का काम हुन् । अब यहींको जनप्रतिनिधि भएपछि महराले यो भन्दा बढी नै गर्छ भन्ने मा दाङबासी ढुक्क छन्, यही नै मे रो जीतको आधार हो  ।
चुनाव जित्नुभयो गनेर् कामको के ही सूची बनाउनुभएको छ ?
मै ले प्रतिबद्धतापत्रमा विस् तृतरुपमा उल्ले ख गरे को छु । सबै भन्दा पहिले हामी एउटा विज्ञहरुको टीम बनाउने छौ ं । त्यसले बिषयगत यो जना बनाउने छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकासका यो जना बनाएर हामी अघि बढ्ने छौ ं । दाङको समृद्धिका लागि मै ले तीनवटा कुरामा ध्यान के न्द्रित गनेर् सो च बनाएको छु । भूमिको उचित ब्यवस् थापन गरी सिंचाईको प्रबन्ध गरे र कृषि क्षे त्रमा आकर्षण बढाउने मात्र हो इन, दाङ कृषि क्षे त्रलाई दे शकै कूल ग्राहस् थ उत्पादनमा यो गदान पु¥याउने गरी अघि बढाउने मे रो यो जना छ । दे शकै आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण जिल्ला दाङ बनाउने मे रो यो जना छ । सिंचाई र खाने पानी सुविधा दाङको ठूलो समस् याको रुपमा दे खिन थाले को छ । अल्पकालीनरुपमा खो लामा हाइड्याम तथा दीर्घकालीनरुपमा डाइभर्सनबाट दाङमा पानीको आपूर्ति गनेर् यो जना बनाइने छ । त्यस् तै यातायात सञ्जाल यहा“को दो स्रो महत्वपूर्ण काम हो  । को इलाबास–लमही–घो राही–शहीदमार्ग–डो ल्पा सडकलाई पूर्णता दिएर भारतदे खि चीन जो ड्ने र दाङलाई त्रिदे शीय ट्राञ्जिटप्वाइन्ट बनाउने हाम्रो यो जना अघि बढिसके को छ । त्यस् तै घो राही–मुर्कुटी–प्युठान–अर्घाखा“ची–पाल्पा–पो खरा सडक निर्माण गरे र प्रदे शका सबै जिल्लाको पहु“च प्रदे श राजधानीमा विस् तार गनेर् र चार नं. प्रदे श र पा“च नं. प्रदे शको राजधानीस“ग कने क्टिीभिटी विस् तार गनेर् यो जना छ । त्यस् तै तुलसीपुर–सुखेर् त–जुम्ला सडकलाई पूर्णता दिएर ६ नं. प्रदे शस“ग जो ड्ने यो जना छ । हामीले अब रे लको पनि सपना दे ख्न थाले का छौ ं । के रुङबाट लुम्बिनीसम्म रे ल आउने नै भयो , यसलाई दाङ हु“दै महे न्द्रनगर र दाङ हु“दै रारा जो डे र के रुङबाट आएको रे ल रारा हु“दै पुनः चीनतिर जाने अवस् था सिर्जना गर्न सकियो भने दाङको कायापलट हुने छ । यद्यपि यो दीर्घकालीन यो जना हो , अहिले नै शुरु नहुनसक्छ । यसबाट दाङलाई पश्चिम ने पालको पर्यटनको हब पनि बनाउन सकिन्छ । ते स्रो कुरा अब भौ तिक विकासस“गै जनताको आर्थिक सामाजिक अवस् था सुधार गर्नुपर्छ । त्यसै का लागि हामीले समाजवादी राज्यसत्ताको कुरा गरे का छौ ं । शिक्षा, स् वास् थ्यलगायतका क्षे त्रमा सबै वर्गका जनताको पहु‘“च विस् तार गनेर् , उत्पादन बढाएर रो जगारका अवसर सिर्जना गनेर् , असक्तहरुको सामाजिक सुरक्षामा राज्यको दायित्व बढाएर लै जाने बिषयमा हामी अब यो जनाबद्धरुपमा नै अघि बढ्ने छौ ं । समग्रमा दाङलाई प्रदे शको राजधानी बनाउने र राजधानी भन्नलायक कसरी बनाउने भन्ने नै मे रो यो जनाबद्ध अभियान हुने छ ।
अन्त्यमा एउटा राजनीतिक प्रसंग । पुरानो समीकरण तो डे र नया“ समीकरणमा जानुभयो  । तपाइ“हरुले नया“ समीकरण बनाएर पनि परिवर्तनका अनुभूति दिनसक्ने आधार के ?
हाम्रो समीकरण मात्र हो इन, पार्टी एकताकै तयारीमा छौ ं । हामीले साझा घो षणापत्र बनाएर चुनाव लडे का छौ ं । चुनावपछि सरकार बनाउ‘छौ ं र लगत्तै पार्टी एकता गछौर् ं । त्यसकारण पहिलो कुरा त, यो समीकरण फे रिएको मात्र हो इन, पूरै राजनीति नै फे रिएको हो  । अकोर् कुरा, हामी यही संविधानबाटै धे रै परिवर्तनको अनुभूति गराउनसक्छौ ं । यो संविधानले प्रस् तावनामा मात्र समाजवाद भने को छै न, धारा उपधारामा समे त त्यसको मर्मबो ध हुने गरी ब्यवस् था गरे को छ । अधिकारको सवालमा यो निकै अब्बल छ । यही संविधान मात्र लागु गर्न सकियो भने पनि जनताको अवस् था पूरै नयॉ ठाउ‘मा पुग्ने छ । त्यसका लागि हामी यो संविधानको रक्षा र पूर्ण कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौ ं । यसका लागि पनि वाम गठबन्धनले जित्नै पर्छ । जसलाई यो संविधान मन परे को छै न, जनताको संघर्षको बे लामा लतारिएर यहॉसम्म आएका छन्, उनीहरुबाट संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन सम्भव छै न । तपाइ‘ले संके त गर्न खो जे को जस् तो कतिपय सवाल छुटे का छन् र अपुग पनि छन् । त्यसलाई पनि हामी सच्याएर अघि बढ्ने छौ ं । ने पालमा कुन प्रणाली अत्यधिक जनताको पक्षमा हुन्छ, त्यसका लागि अघि बढ्न हामी तयार छौ ं । संविधानले प्रष्ट व्याख्या गरे को समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास हाम्रो मूल लक्ष्य हो  । हाम्रो अबको राजनीतिक कार्यदिशा बने को संविधान कार्यान्वयन र त्यसबाटै मुलुक समृद्धि हो  ।
Previous: प्रदेशको राजधानी र समृद्धिको नेतृत्व दाङबाटै
Next: जाजरकोटमा धान उत्पादन घट्दो